Fizahan-tany mora vidy ao amin'ny Nosy Paka | Vaovao momba ny dia
Fizahan-tany mora vidy ao amin'ny Nosy Paka
Mariela Carril | | Shily, soso-kevitra
Kely sy lavitra amin'ny zava-drehetra, dia malaza manerana an'izao tontolo izao ity nosy ity. Ny sarivongana hafahafa sy mahafinaritra dia napetraka tamim-kery ary mpizahatany an-jatony maro izao no mitsidika na manonofy mitsidika ny Nosy Paka.
Saingy toerana lavitra sy somary lafo io, na mieritreritra foana isika. Mazava ho azy fa misy safidy ka raha manonofy mitsidika ny Nosy Paka ianao ary manana teti-bola tery dia aza kivy. Azo atao izany!
1 Nosy Paka
2 Mandehana mankany amin'ny Nosy Paka
3 Mijanona ao amin'ny Nosy Paka
4 Mihinana, mitsangatsangana, mahita
Ny anarany autochthonous dia Rapa Nui Ary na dia an'i Chili aza androany, dia tsy misy ifandraisany amin'ny kolotsaina sy ny tantaran'ity firenena amerikana atsimo ity. Io dia ao amin'ny Polynesia ary nanomboka tamin'ny 1995 UNESCO dia nanome azy io ho Lova manerantany.
Ny kinova ofisialy averimberin'ny arkeology dia ny nahatongavan'ireo vahoaka polinesianina teto an'arivony taona maro lasa izay ary namolavola kolontsaina lehibe, izay ny sarivongana moai Ireo no vokany, saingy noho ny fihoaran'ny besinimaro sy ny fandripahana ala dia nifarana ny sivilizasiôna. Ny aretina naterina avy tany Eropa tamin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX sy ny varotra andevo avy any Peroa dia nanao ny ampahany hafa.
Ny zavatra dia misy ny teoria samihafa satria ny fananganana ireo sarivongana ireo dia miharihary fa nitaky hery Herculean ary farafaharatsiny dia ezaka lehibe ho an'ny mponina ao iray amin'ireo nosy lavitra indrindra eto an-tany. Tanàna iray mifandraika amin'ny natiora ka ny nosy misy azy dia efa nalaina ala ... na tsotra hoe afaka namindra ireo sarivongana mavesatra be nanerana ny nosy dia mbola enigma ihany.
Nosy Paka Nampidirin'i Chile tamin'ny 1888 ary miaina manodidina azy ireo izy ireo ankehitriny 6 olona miaraka amin'ny isan-jaton'ny taranaky ny Rapa Nui.
Mandehana mankany amin'ny Nosy Paka
Tsy mora izy io satria nosy lavitra. Sahabo ho 3700 kilometatra miala an'i Santiago de Chile izany, renivohitry ny firenena Andes. Ary koa, tranonkala lafo vidy izy io satria saika hafarana daholo ny zava-drehetra miaraka amin'ny fandaniana manaraka izay ampidirina amin'ny vidin'ny entam-barotra. Rehefa any Chili ianao dia mila mandray sidina Latam izay manolotra serivisy isan'andro. Ny tsara indrindra dia ny mamandrika mialoha ary mandeha amin'ny vanin-taona ambany, ankoatry ny fandaminana fijanonana maharitra, herinandro farafaharatsiny, satria mampihena ny vidin'ny tapakilan'ny rivotra ihany koa izany.
Te-ho tonga amin'ny sambo ve ianao? Tsy mora izany satria na misy sambo izay avy any Nouvelle Zélande na toeran-kafa any Pasifika atsimo dia zara raha lafo ary lafo be. Ary avy any Silia dia tsy misy sambo ihany koa. Tsy misy sambo fitsangantsanganana manodidina eto, ny nosy dia tsy misy seranana afaka mandray azy ireo.
Mijanona ao amin'ny Nosy Paka
Misy ny zava-drehetra ary ankehitriny tsara fa misy safidy ao anatin'ny Airbnb. Raha manam-bola ianao trano fandraisam-bahiny tsara kokoa foana izy ireo satria ny mijanona amin'ny toerana tsara eto amin'ity nosy ity dia tsy voavidim-bola. Saingy, araka ny nolazaiko tetsy ambony, misy teti-dratsy hafa ho an'ny tetibola tery: lasy, fisofana sy trano ary trano fandraisam-bahiny misy efitrano fatoriana.
Ilay Hostel Peteroànana miaraka amin'ny sakafo maraina maimaim-poana, ao am-pandriana miaraka ary karakarain'ny fianakaviana iray. Isika koa dia manana ny Tranon'i Fatima Hotu folo minitra monja avy eo afovoan-tanàna, misy lakozia iraisana sy efitrano fatoriana misy farafara fandriana sy firakotra madio. Tsy misy WiFi eto fa manolotra Internet ho an'ny mpizahatany ny Tranombokim-panjakana ary tena akaiky ny tranonkala. Safidy somary lafo kokoa Kona tau izay eo afovoan'ny nosy ary akaikin'ny seranam-piara-manidina sy ny morontsiraka.
Ity efitrano fandraisam-bahiny ity dia misy efitrano misy efitra fandroana tsy miankina sy lakozia iraisana izay anaovana sakafo maraina maimaim-poana. Ahitana lambam-pandriana sy lamba famaohana ary manome WiFi maimaim-poana. Na ny famindrana seranam-piaramanidina aza maimaim-poana. ny Hotel Rapa Nui Safidy hafa io, eo afovoan'ny Hanga Roa ary miala eo amoron-dranomasina. Mazava ho azy fa lafo kokoa izy io na dia tsy mahatratra 100 euro aza. Raha ny marina dia misy safidy maro ary mieritreritra aho fa amin'izy rehetra dia tokony hamaky ny hevitr'ireo mpampiasa ianao mba hisorohana ny tsy ampoizina.
Raha manam-bola kely ianao dia ny trano fandraisam-bahiny no tsara indrindra. Ny vidin'ny fatoriana ao amin'ny efitrano fandriana dia tsy mihoatra ny $ 20 fa raha mandeha amin'ny vanim-potoana ambany ianao dia afaka mijanona amin'ny hotely foana na manofa trano fisaka na trano amin'ny vidiny mirary. Ary raha tianao ny karpa dia misy toby hananganana ny lay, ohatra ny malaza Tipie Moana.
Mihinana, mitsangatsangana, mahita
Araka ny efa nolazainay teo aloha dia mety lafo ny fisakafoanana eto satria avy any Silia ny zava-drehetraavy eo izay ataon'izy ireo backpackers maro no mitondra sakafo. Karana, kafe, dite, siramamy, cookies, vary, paty. Raha mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny na any amin'ny trano fisakafoanana ianao dia manana lakozia ary izay no izy. Voavaha ny olana. Ny tena voarindra indrindra aza dia mitondra legioma toy ny tongolo, ovy, cauliflower, peppers, voankazo, tongolo gasy, mofo, voanemba, ronono vovoka, divay.
Raha mandeha miaraka amin'ny olona iray ianao, dia olana ny fanaovana lisitra zaraina sy fizarana ny fividianana ao anaty kitapo. Rehefa eo amin'ny nosy ianao dia ho feno fankasitrahana hizara izany rehetra izany. Ary raha tsy ataonao ao anaty ny zava-drehetra dia poketra ary alefanao amin'ny valizinao izany. Latam dia mamela anao valizy roa miaraka amin'ny totalin'ny 25 kilao ka misy toerana malalaka. Raha vantany vao afaka mividy empanada, trondro, voankazo ...
Mba hahazoana manodidina ny Nosy Paka dia misy safidy roa tsara: manofa taxi na manofa bisikileta. Tsy lafo ny taxi ary tsara ny bisikileta rehefa mandeha lavitra. Ny fandehanana amin'ny lafiny iray amin'ny nosy mankany amin'ny ilany hafa dia maharitra 90 minitra ka raha tsara endrika ianao dia tsy misy zavatra tsy vitan'ny bisikileta. Afaka manao izany koa ianao manofa fiara na moto samirery ary mamonjy vola ianao satria lafo ny fitsidihana.
Ny fanofana moto dia manodidina ny $ 40 isan'andro ary manome anao fahalalahana betsaka. Raha tianao fiara na taxi miaraka amin'ny mpamily, dia azo atao ny mifampiraharaha amin'ny vidiny. Na izany aza. Inona no tokony ho fantatsika ao amin'ny Nosy Paka?
Ny fitsidihana an'i National Park tsy maintsy atao izany. Ny fidirana dia manodidina 60 dolara ho an'ny mpizahatany fa satria ny nosy iray manontolo dia valan-javaboary iray, dia manokatra varavarana ho anao izy na aiza na aiza. Ny moai malaza dia miparitaka hatraiza hatraiza ary amin'ny fahitana an'izao tontolo izao mba hahitanao azy ireo imbetsaka tianao, afa-tsy ny vatokara izay angalarina ao amin'ny Museum ao Rano Kau. Eto dia tsy afaka miditra amin'ny indray mandeha fotsiny ianao miaraka amin'ny tapakila, izay tokony hividy raha vantany vao miala ny fiaramanidina.
Fantaro ny moaiIreo izay zara raha nibolisatra tamin'ny tany sy ireo izay nakarina mba hahitana haavo sy endrika mahatahotra, dia mitaky fotoana fa manome ny sary tsara indrindra. Saingy manome bebe kokoa ny nosy: azonao atao antsitrika sy snorkeling ary jereo ny moai rendrika, Surf, sunbat, mandehandeha.
Ny tena marina dia fanandramana lehibe ary iray amin'ireo zavatra mampiala voly indrindra azonao atao ny herinandro any amin'ny Nosy Paka, raha mankany Shily ianao. Noho izany, aza diso anjara na dia tsy mieritreritra aza ianao fa ho ampy ny vola!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Shily » Fizahan-tany mora vidy ao amin'ny Nosy Paka
Zavatra hitanao sy hatao amin'ny fitsidihanao an'i Scotland
Maimaim-poana Dublin, drafitra sy hevitra hankafizana nefa tsy mandany vola